Ciidamada Millitariga ee dalka Urdun oo xubna ka tirsan ururka ISIS ay ku dileen xuduuda Suuriya. | Afrikada
Ciidamada Millitariga ee dalka Urdun oo xubna ka tirsan ururka ISIS ay ku dileen xuduuda Suuriya.
Ciidamada millitariga ee dalka Urdun ayaa maanta shaaciyay in xxubna badan oo katirsan ururka isugu yeero dowlada islaamka ee ISIS in lagu dilay dagaalo ka dhacay xuduuda uu dalkaasii la wadaago suuriya, xili ay doonayaan in xadkaasii ay kasoo talaabsadaan.
Ciidankan ayaa sheegay in xubnahan lagu weeraray hubka noocyadiisa kala duwan xili ay soo gaareen buuraha Yarmuuk, waxaana dagaalkan uu socday mudo kabadan 20 saacadood.
War qoraal ah oo kasoo baxay militariga dalka Urdun ayaa lagu sheegay in xubnihii kale ee weerarkan ka badbaaday in ay dib ugu carareen gudaha dalka Syria, oo markii hore ay ku sugnaayen.
Xubnahja katirsan ururka ISIL ama daacish ayaa sanadihii ugu danbeeyay weeraro culus ka fulinayay koonfur galbeed ee dalka Suuriya, halkaasii oo ay kula dagaalamayaan ciiidamada dowlada madaxweyne Bashar Al Assad.
Weerarkii ugu danbeeyay waa kii ugu xumaa abid oo ay ka geesteen suuq aad u mashquul badan oo ku yaalo caasimadda Sweida ee dalka Suuriya, waxaana ay weerarkaaasii ku dileen 200 oo qof.
Xuduuda Suuriya ay la wadaagto Jordan waxaa ka dagaalamaa ururada kala ah ISIS iyo Khaled Bin Al Waleed, waxayna xoogagan hubeysan si wayn u maamulaan deegaanada ku yaala koonfurta wadanka Syria, iyo deegaanada ku dhaw halka ay ku suganyihiin yahuuda ee Golan Heights.
Xili howlgallo culus ay ka socdaan deegaanada dalka Syria, waxaa la qiyaasayaa ku dhawaad 1500 oo dagaalamayaal oo katirsan ururka Daacish oo ciidamada dowlada bashar al assad ay kala wareegeen deegaanadii ay markii hore maamulayeen in iminkan ay si dhuumaaleysi ah ku joogaan deegaanka Yarmouk oo u dhaw xuuduuda ay wadaagaan Syria iyo Jordan.